Wasmer, seti yezvishandiso zveWebAs Assembly zvinoshandiswa | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore maviri ebudiriro kuburitswa kweshanduro yekutanga kwakaziviswa chirongwa chakakosha Wasmer, iyo inovandudza nguva yekumhanya yekumhanyisa WebAssembly ma module.
Wasmer mashandisiro enzvimbo inosanganisira kugadzirwa kwezvose zvinoshandiswa izvo zvinogona kuitwa pane akasiyana masisitimu anoshanda, pamwe nekurongeka kwekumisikidzwa kwekuitwa kwekodhi isingavimbike. Iko kuiswa kweiyo server application kuvaka kunotsigirwa, semuenzaniso, kuburitswa kweNinx server yakanyorwa paWebAssembly kwakaratidzirwa.
1 About Wasmer
2 Isa iyo Wasmer yekumhanyisa nguva
Kubatika inowanikwa nekunyora kodhi yekushandisa mu middleware Yakadzika-chikamu WebAssembly iyo inogona kumhanya pane chero inoshanda system kana kubatanidzwa muzvirongwa mune mimwe mitauro yekuronga.
Zvirongwa iwo midziyo isingaremi inomhanya iyo WebAssembly pseudocode. Midziyo iyi haina kusungirwa kune yekushandisa system uye inogona kuve nemaapplication ekutanga akanyorwa mune chero chirongwa chemutauro
Iyo Yekushandisa Emscripten inogona kushandiswa kuumbiridza muWebAs AssemblyPamusoro pekushandurira WebAssembly kumuchina kodhi yepuratifomu yazvino, maforamu akati wandei akabatana, senge LLVM uye Cranelift kodhi jenareta.
Kune rimwe divi, kugona kudzora uye kudyidzana nehurongwa zvinopihwa kuburikidza neWASI (WebAssembly System Interface) API, iyo inopa mapurogiramu ekushandira ekushanda nemafaira, zvigadziko, uye mamwe mabasa anopiwa nehurongwa hwekushandisa.
kunze kwaizvozvo zvinoshandiswa zvakasarudzika kubva kune inomiririra system mune sandbox nharaunda uye ivo vanokwanisa chete kune zvakaziviswa mashandiro (chengetedzo mashandiro anoenderana neanogona manejimendi, yezviito neimwe yega zviwanikwa (mafaera, madhairekitori, zvigadziko, mafoni mafoni, nezvimwewo), iko kunyorera kunofanirwa kugamuchira masimba anoenderana).
Iwo mapurogiramu anogoverwa nenzira yeyakajairika WebAssembly ma module, ayo anogona kutarisirwa kuburikidza neWAPM package maneja.
Kana ari maficha e Wasmer vhezheni 1.0 zvinotevera zvinobuda pachena:
Kuita kwepamusoro kwekumhanyisa kunyorera, padhuze nekuitwa kwemacustomer Assembly uye yakakwira yekubatanidza kumhanya.
Yakawedzeredzwa dhizaini nekwanisi yekubatanidza akasiyana macomputer ekumashure (Singlepass, Cranelift, LLVM) nemainjini (uchishandisa JIT kana inogadzira kodhi yemuchina).
Native Object Injini, iyo inobvumidza kugadzira kodhi yemuchina yeiyo yakapihwa sisitimu yeWebhuMusangano module ("wasmer-native compilation" kuburitsa yakamisikidzwa .so, .dylib uye .dll mafaira mafaira).
Yakafananidzwa kodhi inoda kushomeka yekuuraya nguva yekumhanya, asi ese sandbox kupatsanurwa kugona kunochengetedzwa.
Musoro usina musoro kuendesa pre-yakarongedzwa zvirongwa neyakavakirwa-muWasmer.
Muchinjiko-kuunganidzwa rutsigiro, semuenzaniso, kugadzira muchina kodhi yeAarch64 yekuvakisa pane x86_64 system.
Iyo yakapusa API yekugadzira plugins uye plugins pasina iko kudikanwa kwekufunda epamberi WebAssembly pfungwa.
Zvishandiso zvekugadzirisa uye kukanganisa kubata.
Finalmente Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve Wasmer, iwe unofanirwa kuziva kuti eIyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muRust, ine la MIT rezinesi uye unogona kutarisa ruzivo rwayo pane yayo yepamutemo webhusaiti ku inotevera chinongedzo.
Isa iyo Wasmer yekumhanyisa nguva
Kune rimwe divi, kune avo vanofarira kugona kumhanyisa mudziyo weWebAs Assembly, iwe unongofanirwa kuisa iyo Wasmer nguva yekumhanya pane yako system, iyo inouya isina zvinoenderana nekunze.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Wasmer inogona kumhanyisa pane chero chikuva macOS, Linux neWindows, chinodiwa chete ndechekuti nguva yayo yekumhanya iiswe pane yako system.
Kuti uite izvi, chingomhanya unotevera kuraira mune terminal:
Uye mushure meizvozvo, ivo vanofanirwa kuitisa iyo inodiwa faira:
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvekuti Wasmer anoshanda sei kana kuda kuziva yayo sosi kodhi, unogona kutarisa zvese izvo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Wasmer, seti yezvishandiso zveWebAs Assembly zvinoshandiswa